25 mitsara yekuverenga panguva yepamuviri | Kuzvibatsira Zviwanikwa
Maria Jose Roldan | 10/05/2021 19:00 | Mitsara
Kubata nhumbu inhanho yakanaka kwazvo muhupenyu hwemukadzi. Inguva iyo hupenyu hwemukadzi hucha shanduka zvachose, hapana chichave chakafanana kubva asati abata nhumbu kusvika paanosununguka. Uye nepo, mukati memwedzi iyoyo mipfumbamwe, inguva yekunakidzwa. Kunyangwe zvichizogara zvisiri nyore. Tiri kukupai mamwe mazwi ekuverenga panguva yekuzvitakura.
Neiyi nzira, kunyangwe iwe uri nepamuviri kana kana uchiziva mumwe munhu ari, iwe unogona kunakirwa mazwi anozoita kuti iwe unzwe zvakanaka. Iwe unozonakidzwa neiyi nhanho inoyevedza uye kunyangwe paine zvinganetsa, hunhu hwako hwekuva amai hwakatomutswa uye Iwe ucharwa izvo zvinotora kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka.
Sekuziva kwevanhu vazhinji, ndizvo zvatiri kufunga, saka pfungwa dzedu dzinoumba zuva redu zuva nezuva. Izvo zvakakosha kuti urichengete nemazwi akanaka kuitira kuti nenzira iyi iwe ugone kuve neyakajeka kwazvo kana kunyatsoona kwakanaka kweicho chako chitsva chokwadi.
1 Mashoko ane simba guru pauri
2 Wakatobatana nemwana wako
3 Mitsara yevakadzi vane pamuviri
Mashoko ane simba guru pauri
Nemitsara iyi yatichazokupa, iwe unozoona kugona kwavo mune iwe uye mune ino nhanho yakanaka iwe yauri kutanga. Iwe unozogona kudzidza kudzidza kutonga pfungwa dzako uye kuti iwe unogona kusarudza iyo mifungo inonyatsoita kuti unzwe kunakirwa.
Nokudaro, usazeze kuverenga mitsara iyi nguva dzese paunobata dumbu rako, uye udza mudiki wako zvese zvaunomuda, kuti iwe unoziva kuti ane hutano uye kuti urikugadzirira kumupa hupenyu hwakanakisa, asingarasikirwe nechinhu chakakosha: rudo rwako rwese.
Zvakajairika kuti unzwe kusava nechokwadi uye kunyange kutya, asi haugone kubvumira kutya uku kukurire iwe, unofanirwa kudzora pfungwa dzako kuti unzwe zvakanaka! Kunyangwe kana nhumbu yako isiri kuve yakanakisa, njodzi huru kana paine kumwe kuomarara ... usatomborasa tariro. Dzora pfungwa dzako kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka.
Kubata ndiyo nzira yechisikigo yekugadzira nekupa hupenyu, uye nekuda kwechikonzero ichocho, zvinoshamisa nguva dzese padzinoitika. Iwe unofanirwa kunakirwa neiyi nhanho nerunyararo rwepfungwa uye nemanzwiro akanaka anokuzadza iwe kugadzikana mupfungwa.
Wakatobatana nemwana wako
Kana iwe uri nepamuviri, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe wakabatana nemwana wako kubva panguva yawakaziva kuti mumwedzi mishoma iwe unenge uri amai. Naizvozvo, mitsara iyi yakanyanya kukuitira iwe neyemwana wako. Nekuti zvaunonzwa, naiye anonzwawo. Chii chimwe, kana nguva yasvika yekuti nzeve dzake dzikudziridzwe, anozokwanisawo kunzwa izwi rako Uye nekudaro, iwe unogona kuverengera aya mazwi zvinonzwika kwaari kuti uwedzere kubatana kwako.
Neimwe nzira anozoziva kuti iwe uri padivi pake, uye kuti zvese zvaunoita, kunyangwe iwe ukatarisa pfungwa dzako, ndezvaari. Usazeze kumuratidza hupenyu hwese uhwu kubva mukati, uye tinogona kukuvimbisa kuti izvi, inozoitika kana iwe uchinge uinayo mumaoko ako uye inotanga kukura.
Mitsara yevakadzi vane pamuviri
Kune zvese izvi, usarasikirwa nemitsara iyi kuti uverenge panguva yekuzvitakura, nekuti zvinokuita kuti unzwe zvakanaka uye zvakare kuve nehukama newe, nehupenyu hwako uye pamusoro pezvose, nemwana wauchapa hupenyu kwaari. Nyora pasi uye uverenge pese paunoda, hauzombozvidembi!
Nenhumbu dumbu rangu rakanaka semoyo wangu.
Paunenge uchitya kana kusuruvara, fungidzira kufara kwauchaita kuona chiso chemwana wako, kutya kwako kwese kuchasara kumashure.
Ganda rangu rinotambanuka nekusimba kuzere panguva yekuzvitakura, nekudaro richichengetedza runako rwaro rwose.
Kunzwa mafuta kunotora mwedzi mipfumbamwe, asi mufaro wekuva amai unogara nekusingaperi.
Makorokoto amai, kunakidzwa kukuru kwehupenyu hwenyu kwatanga, uye makorokoto, mudiwa mwana, inzwa rombo rakanaka nekuti wanga uri amai vakanyanya kunaka pasirese.
Iko hakuna nzira yekuve amai vakakwana, asi kune mamirioni nzira dzekuve amai vakanaka.
Mwana wako anokura mukati uye unozviita iwe semunhu, kubva zvino zvichienda mberi iwe uchaona nyika nemaziso akasiyana.
Funga nezve nhumbu inotambanudza mamaki se mamaki ehupenyu.
Kuve amai kune humhu hunhu. Izvo zvese zvinouya kune zvakakosha.
Chishamiso chinoitika mauri, chidimbu chedenga chiri kukura mukati mako, chengetedza icho nekuti chichava mutoro wekukuratidza kuti mufaro nerudo chii.
Kuunza mwana wauri kutarisira munyika hakufanirwe kunge kuri kwekutya kwako kukuru asi kumwe kwekugona kwako kukuru.
Kune mashoma matanho akakurisa mukurumbira muhupenyu hwemukadzi chero upi zvake kupfuura nhumbu.
Hazvina kumboitika muhupenyu iwe paunowana zvirinani uye zvakanyanya kusafarira unyoro kupfuura hwaamai vako.
Hapana mutauro unogona kuratidza simba, runako, uye gamba rerudo rwaamai.
Kuve amai kwakanyanya kupfuura kubereka, iko kutanga kufunga nezvemwana wako uyezve nezvako, makorokoto, amai vatsva!
Nakidzwa kubva parizvino chishamiso chidiki icho chinouya munyika kuti chikupe iwe chemufaro mukuru
Nakidzwa nepamuviri pako mazuva ese, mukadzi, uye kana iwe ukatarisa kumashure, rangarira nenyemwerero chishamiso chekusika.
Isimba ripi iro rakaiswa mudumbu mako kwemwedzi mipfumbamwe uye rinoshandura hupenyu hwako, zvichidarika chero kutarisira.
Hupenyu hwakazvarwa kubva mudumbu raamai hupenyu huviri hwakabatana nekusingaperi.
Moyo waamai igomba rakadzika mugomba pazasi paro paunogara uchiwana ruregerero.
Vacheche vanogara vachiunza matambudziko mazhinji navo kupfuura zvawaifunga ... asi ivo zvakare vakanyanya kunaka kupfuura zvawaifunga.
Kuita sarudzo yekuva nemwana kwakakosha. Iri kusarudza kuti moyo wako unofamba uchibuda mumuviri wako zvachose.
Panguva yekuzvitakura, mukadzi anonyorera kune uyo anova iye anotarisisa rudo uye kuzvipira kwehupenyu hwake hwese.
Kuva amai harisi basa. Uye harisi basa, kure nazvo. Iyo ingori imwechete kurudyi pakati pevamwe vazhinji.
Unotakura mwana mudumbu kwemwedzi mipfumbamwe, mumaoko ako kwemakore matatu, uye mumoyo mako kweupenyu hwako hwese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvibatsiro zvekuzvibatsira » Resources » Mitsara » 25 mitsara yekuverenga panguva yepamuviri